China Florfenicol Injection 20% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
I-Florfenicol iyimithi elwa namagciwane ebanzi ebanzi esebenza ngempumelelo ekulweni namagciwane amaningi we-Gram-positive ne-Gram-negative ahlukaniswe nezilwane ezifuywayo. Ukuhlolwa kwelabhorethri kukhombisile ukuthi i-florfenicol iyasebenza ukulwa nezifo zebhaktheriya ezihlukaniswe kakhulu ezibandakanyeka ezifweni zokuphefumula zezinkomo ezibandakanya iMannheimia haemolytica, iPasteurella multocida, i-Histophilus somni ne-Arcanobacterium pyogenes, kanye nezifo ezibangelwa amagciwane ezivame ukuhlukaniswa ngezifo zokuphefumula ezingulubeni, kufaka phakathi i-Actinobacillus i-pleuropneumoniae ne-Pasteurella multocida.
I-Introflor-300 ikhonjiswa ekwelashweni kokuvimbela nokwelapha izifo ezithinta ukuphefumula ezinkomeni ngenxa yeMannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ne-Histophilus somni. Ukuba khona kwalesi sifo emhlambini kufanele kusungulwe ngaphambi kokwelashwa kokuvikela. Kukhonjiswa ngokwengeziwe ekwelapheni ukuqubuka okunamandla kwezifo zokuphefumula ezingulubeni ezibangelwa izingcindezi ze-Actinobacillus pleuropneumoniae nePasteurella multocida ethinteka ku-florfenicol.
Ayisetshenziselwa izinkomo ezikhiqiza ubisi ukuze zisetshenziswe ngabantu.
Akufanele isetshenziswe ezinkomeni ezindala noma izingulube ezihloselwe ukuzalanisa.
Musa ukuphatha ezimeni zokungezwani komzimba okwedlule ku-florfenicol.
Ezinkomeni, ukwehla kokudla nokuncipha kwesikhashana kwendle kungenzeka ngesikhathi sokwelashwa. Izilwane eziphathwayo zilulama ngokushesha futhi ngokuphelele lapho kumiswa ukwelashwa. Ukuphathwa komkhiqizo ngemizila ye-intramuscular and subcutaneous kungadala izilonda zokuvuvukala endaweni yomjovo eqhubeka izinsuku eziyi-14.
Ezingulubeni, imiphumela emibi evame ukubonwa uhudo lwesikhashana kanye / noma i-erythema / i-edema eqondile kanye ne-rectal erythema / edema engathinta ama-50% ezilwane. Le miphumela ingabonwa isonto elilodwa. Ukuvuvukala kwesikhashana okufika ezinsukwini ezi-5 kungabonakala esizeni somjovo. Izilonda ezivuthayo endaweni yomjovo zingabonakala kuze kube yizinsuku ezingama-28.
Ngomjovo ongaphansi kwesikhumba noma we-intramuscular.
Ukwelashwa (i-IM): 1 ml ngesisindo somzimba esingu-15 kg, kabili ngesikhawu esingu-48-h.
Ukwelashwa (SC): 2 ml ngesisindo somzimba esingu-15 kg, esinikezwa kanye.
Ukuvimbela (SC): 2 ml ngesisindo somzimba esingu-15 kg, esinikezwa kanye.
Umjovo kufanele unikezwe entanyeni kuphela. Umthamo akufanele weqe u-10 ml kusayithi ngalinye lomjovo.
Izingulube: 1 ml ngesisindo somzimba esingu-20 kg (IM), kabili ngesikhathi samahora angama-48.
Umjovo kufanele unikezwe entanyeni kuphela. Umthamo akufanele weqe ku-3 ml kusayithi ngalinye lomjovo.
Kunconywa ukuthi welaphe izilwane ezigabeni zokuqala zesifo futhi uhlole impendulo ekwelashweni kungakapheli amahora angama-48 ngemuva kokujova kwesibili. Uma izimpawu zomtholampilo zesifo sokuphefumula ziphikelela emahoreni angama-48 ngemuva kokujova kokugcina, ukwelashwa kufanele kushintshwe kusetshenziswa enye indlela yokwakha noma enye i-antibiotic futhi kuqhubeke kuze kube yilapho izimpawu zomtholampilo sezilungisiwe.
Qaphela: I-Introflor-300 ayisetshenziselwa izinkomo ezikhiqiza ubisi ukuze zisetshenziswe ngabantu
Ngenyama: Izinkomo: izinsuku ezingama-30 (umzila we-IM), izinsuku ezingama-44 (umzila we-SC).
Izingulube: izinsuku eziyi-18.
Langaphambilini Injection ye-Enrofloxacin 10%
Olandelayo: Inaliti ye-Furosemide 2.5%
Inaliti ye-Furosemide 2.5%
Inaliti ye-Tilmicosin 30%